Wakiilka caanka ah ee Jorge Mendes oo shaaca ka qaaday in Ansu Fati laga soo gudbiyay dalab weyn – Gool FM
(Yurub) 11 Sebt 2020. Wakiilka caanka ah reer Portugal ee Jorge Mendes ayaa kulan la qaatay maamulka kooxda Barcelona, wuxuuna si u sheegay in Ingiriiska uu kaga yimid dalab qaali ah da’ayarka reer Spain ee Ansu Fati.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” kulanka ayaa looga dooday dhowr arrimood oo sidoo kale uu qeyb ka ahaa suurtogalnimada uu Nelson Semedo kaga tagi karo kooxda Blaugrana.
Inkasta oo tababaraha cusub reer Holland ee Ronald Koeman uu doonayo inuu sii haysto Nelson Semedo, si uu qeyb kaga noqdo qorshihiisa laga bilaabo xilli cyaareedka cusub.
Madaxweynaha Blaugrana ee Josep Maria Bartomeu ayaa ku dhawaaqay in Ansu Fati.a uusan iib aheyn, laakiin Jorge Mendes ayaa durba keenay dalab dhab ah oo ku aadan ciyaaryahanka, inkastoo aan la shaacinin cida soo gudbisay, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka yimid Premier League ama Bundesliga.
Dhankiisa, Semedo ayaan meesha ka saarin fikirka ah inuu ka tago garoonka Camp Nou isla markaana uu la soo kulmo khibrad cusub oo meel kale ah, sida uu qoray wargeyska “Mundo Deportivo”.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in arinta ku saabsan iibka Ansu Fati laga wada hadlay intii uu socday kulanka, iyadoo ilo wareedyo ka tirsan kooxda ay ku adkeysteen inaysan ka hadlin cusbooneysiinta qandaraaska ciyaaryahanka.
Ilo wareedyo kale oo warbaahineed ayaa ku warramay inuu jiro dalab Ingiriis ah oo gaaraya 150 million euros oo ka yimid koox Ingariis ah, laakiin Barcelona ayaa ku adkeysatay go’aankeeda ah inaysan ka fiirsan doonin fikradda iibinta ciyaaryahanka.
Chelsea oo iska diiday dalab cajiib ah oo laga soo gudbiyay N'Golo Kanté